Massimiliano Allegri oo shaaca ka qaaday awooda Zinedine Zidane ee kooxda Real Madrid – Gool FM
Dajiye July 6, 2020
(Yurub) 06 Luulyo 2020. Macalinkii hore kooxda Juventus ee reer Talyaani Massimiliano Allegri ayaa ammaanay tababaraha Real Madrid ee Zinedine Zidane oo guulo waa weyn ku hoggaamiyay Los Blancos, isla markaana ku dhow inuu ku guuleysto horyaalka La Liga markii labaad ee xirfadiisa tababarenimo.
Massimiliano Allegri ayaa aaminsan in awooda Zinedine Zidane ay tahay in markasta uu si joogta ah u raadiyo isku dheelitirka weerarka iyo difaaca, isagoo dhinaca kale carabka ku adkeeyay muhiimadda doorka uu ka qaatay xiddigga reer Brazil ee Casemiro si uu Zidane u gaaro himiladan.
Haddaba macalinka reer Talyaani ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Marca” ee dalka Spain wuxuu kaga hadlay macalinka reer France ee Zinedine Zidane, wuxuuna yiri:
“Aniga ahaan, waxaan jeclahay awoodiisa ku aaddan isku-dheelitirka lama huraanka ah ee koox tayo iyo karti buuxda leh”.
“Aniga ahaan ku tiirsanaanta Casemiro waa go’aan aad muhiim ugu ah Zinedine Zidane”.
Intaas kaddib Massimiliano Allegri ayaa qiray in labo sano kahor 2018-kii ay Real Madrid ay xiriir la soo sameysay si uu ugu noqdo badelka Zinedine Zidane ee shaqada tababarka kooxda, wuxuuna yiri:
“Labo sano ka hor, waxaa jiray xiriir ay ila soo sameysay kooxda Real Madrid, laakiin waxba ma dhicin sababtoo ah waxaan qandaraas kula jiray Juventus”.